theZOMI: [mrsorcerer:37944] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကျင့်ကြံအပ်ရာ အဖြာဖြာ ...
[mrsorcerer:37944] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကျင့်ကြံအပ်ရာ အဖြာဖြာ ...
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ကျင့်ကြံအပ်ရာ အဖြာဖြာ ...
Cloud Cuckoo Land shared အင်းလေးမီဒီယာ's photo.
၄။ မိမိပိုင်မဟုတ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မတရား ပိုင်ဆိုင်လိုသည့် မတရား ယူလိုသည့် လောဘ မထွက်ပါနှင့်။ ရောင့်ရဲပါ။ တင်းတိမ်ပါ။ ဆင်းရဲသည်ကို ဂုဏ်ယူပါ။ မတရား ချမ်းသာတာကို ဂုဏ်မယူပါနှင့်။
၅။ သတ္တဝါတို့ကို မညှင်းဆဲပါနှင့်၊ မနှိပ်စက်ပါနှင့်၊ ကာယအားဖြင့်၊ နှုတ်အားဖြင့်၊ စိတ်အားဖြင့် မညှင်းဆဲပါနှင့်။
၆။ သတ္တဝါအားလုံး မိမိနှင့် ထိတွေ့ သိရှိသူ၊ မိမိနှင့် ထိတွေ့သိရှိခြင်း မရှိသူ၊ မိမိအား ချစ်ခင်လိုလားသူ၊ မိမိအား မုန်းတီးစက်ဆုပ်သူ၊ မိမိအား ချစ်လည်းမချစ်၊ မုန်းလည်းမမုန်း၊ အလယ်အလတ် သဘောရှိသူ အားလုံးအပေါ် သန့်ရှင်း ကြည်လင်သော မိမိနှင့် ထပ်တူဖြစ်သော မေတ္တာထားရှိပါ။
၇။ လိမ်ညာ မုသားစကား ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၈။ မည်သည့် စိတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကောင်းစေလို၍ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးစေလို၍ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဖရုသဝါစာ တည်းဟူသော ဆဲဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၉။ ချစ်သူနှစ်ယောက် ကွဲသွားအောင် ကုန်းတိုက်သော၊ ရန်တိုက်ပေးသော ဝိသုဏဝါစာ စကားကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၁၀။ ကလေး သူငယ်များနှင့် လူဖျင်း လူပေါ့တို့ နားထောင်၍ ကောင်းရုံသာဖြစ်သော (အနက် အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊ အကျိုးမရှိသော) အပျက်အချော် ပျော်ရုံသာဖြစ်သော သမ္ဖပ္ပလာပ စကားကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် ပါဝင်ကာ အာလာပသလ္လပ ဗရုတ်သုတ်ခ မဟုတ်က၊ ဟုတ်က စကားများမပြောနှင့်။
၁၁။ ဆိုရေးရှိက ဆိုသည့်စကားကို နားခံသာအောင်၊ သဘောပေါက် လွယ်အောင် သာယာ ပျောင်းညင်းစွာ ပြောဆိုပါ။ လူပုံအလယ်တွင် အရှက်ကွဲစေခြင်း၊ ဒေါသတကြီး ပြုမူ ပြောဆိုခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၁၂။ ငါးပါးသီလကို မြဲမြံစွာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ပါ။
၁၃။ သရဏဂုံ သုံးပါးကို တည်ပြီးလျှင် ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ဘာဝနာ၊ မေတ္တာဘာဝနာကို ပွားပါ။ ဝိပဿနာ လမ်းသို့ တက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
၁၄။ သူတော်ကောင်းတို့ကို ဆည်းကပ်ပါ။
၁၅။ သူတော်ကောင်း တရားတို့ကို ကြားနာမှုများပါ။
၁၆။ အစဉ်ကြည်လင်သော ကောင်းသော နှလုံးကိုသာ သွင်းပါ။
၁၇။ လောကုတ္တရာ တရားတော်တွင် စိတ်ကိုမြှုပ်နှံထားပါ။
၁၈။ - ခန္တီစ သည်းခံခြင်းတရားကို မမေ့လျော့လေနှင့်။
- ရန်ကိုရန်ချင်း မတုံ့နှင်းနှင့်။
- မေတ္တာဖြင့်သာ ရန်ကို အောင်နိုင်ရာ၏။
၁၉။ ကာယ၊ ဝစီ၊ မနောအားဖြင့် ပြုမူလှုပ်ရှား ပြောဆိုမှု၊ ကြံစည်တွေးတောမှု မှန်သမျှသည် သင့်မသင့်၊ လျော်မလျော်၊ အချိန်အခါ ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ ပြောလျှင်ဘာဖြစ်မလဲ၊ မပြောလျှင် ဘာဖြစ်မလဲ၊ ဆင်ခြင်ပြီးမှ ပြောသင့်၏။ လုပ်သင့်၏။ စဉ်းစားသင့်၏။ အကျိုးအပြစ် ဝေဖန်ပြီးမှ လုပ်သင့်၏။ ပြောသင့်၏။ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ၊ ချွန်းမရှိ၊ ပညာမရှိ မပြုမူသင့်။
၂၀။ ဧကောဓမ္မော ဟူသည့်အတိုင်း မိမိစိတ်ကို စောင့်ထိန်းမှသာ တရားလည်းရ၊ လူကောင်း သူကောင်းလည်းဖြစ်၊ ယခုဘဝတွင်ရော၊ သံသရာတွင်ပါ ချမ်းသာသုခ ရနိုင်သည်။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း မဂ်တရား၊ ဖိုလ်တရားကို ကျင့်ကြံ အားထုတ်နိုင်ပါစေ။
၂၁။ စိတ်ကို မေတ္တာဖြင့်ထုံမွမ်းပါလေ။
၂၂။ မိမိစိတ်ကို အစဉ် သတိဖြင့် ကပ်ထားပါလေ။ မလွှတ်လိုက်ပါနှင့်။ စိတ်ဟူသည် ဖြန့်ကျက်တတ်သော သဘောရှိ၏။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 4/18/2013 08:56:00 AM